လက်နက်နဲ့ လက်ပ်တော့ပ် လဲမယ်
ပြက်လုံးနဲ့ မက်လုံးတွေ ဝေတဲ့ခေတ်။
တရုတ်ရဲ့ တုတ်ကို၊ မုချ ကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့
ဘူးလက်နဲ့ ဆော်ရမယ်ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခေတ်။
မကြားဖူး၊ မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူးတဲ့
ဒုက္ခသည်အသစ်တွေ မွေးဖွားလာ၊ ဒိုနာရှာမောရတဲ့ခေတ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို တမ်းဆွတ်၊ လွတ်လပ်ခြင်း မျှော်ရည်
ပလူးပလဲ ဆက်ဆံကြတဲ့ ကွန်ရက်ခေတ်။
မလိုတမာ ပြောမရတဲ့ ပါတီကြီးဝါဒခေတ်။
မူပိုင်ခွင့် ရင်ထိုးတေ၊ွ လက်သိပ် ခိုးဝေထားတဲ့
၂၀၀၈ သာ မထိနဲ့၊ ညှိစရာမလိုဘူး
အင်တာဗျူး အလိုလိုပေးတဲ့ မီဒီယာခေတ်။
ကြည်ညိုရမှန်း မသိတဲ့ခေတ်။ ။
လက်ပ်တော့ပ် = Laptop
ဘူးလက် = Bullet
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:18 AM
beautiful.....yeah...how come we are in this situationsss...??? how can we escape ....how is our future. reslave under their arm time by time, age by age...,,,,poor ......and poor....
လောကကြီးထဲမှာ ရှုပ်ထွေးစရာတွေနဲ့ ကြုံးရတဲ့အခါ ဆေးစွဲသူတွေဟာ ကိုယ်ကိုကိုယ် သေကြောင်ကြံတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တယ်။
I like the best poem.Showing every situation in Burma transitional during period.Thankalot poem writer.